कांग्रेस र नेकपाबीच संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिकाबारेमा छलफल हुने « हातमा खबर
कांग्रेस र नेकपाबीच संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिकाबारेमा छलफल हुने
प्रकाशित मिति : २०७७, ३१ भाद्र बुधबार १५:४२
काठमाडौं । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को कार्यकारी निर्देशकमा डा दीपक भण्डारी नियुक्त भएका
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले हिमालय एयरलाइन्सलाई भूमिस्थ प्रबन्ध
मध्यान्ह मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, होला त मन्त्रिमण्ड पुनर्गठन ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्याह्न १२ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले रिक्त रहेको उपसभामुख पदलाई पूर्णता